Home အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေချုပ် အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး
မဲဆန္ဒနယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်(၁)၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်
ကိုယ်စားပြုပါတီ/တသီးပုဂ္ဂလ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ထမ်းဆောင်သည့်တာဝန် ( ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန)
စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၃၀ . ၃ . ၂၀၁၁
- ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၆ ခုနှစ်ထိ အထက(လဲချား)၌ သူငယ်တန်းမှ ဒုတိယတန်းအထိ၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အထိ အထက(ကွမ်းလုံ)၌ တတိယတန်းမှ သတ္တမတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့ကာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၅ ခုနှစ်ထိ အထက(၁)လှိုင်မြို့နယ်၌ ပညာသင်ကြားပြီး ဒသမတန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ထိ မန္တလေး(ဆေးတက္ကသိုလ်)၌ ဘွဲ့ရသည်အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။
- ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ထိ ကလေးဆေးရုံ(မန္တလေး)၌ လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ ကွမ်းလုံပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၅။ ရှေးဟောင်းသုတေတန၊ အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန